France Archive - Gool FM - page 5	twitter
Labiskan cusub ee shirkadda Paul Pogba ‘PP’ ayaa waxay isugu jiraan Jaakad, Surweel, Funaanado, Kobaha isboortiga (ACE 17+ Purecontrol Firm Ground Boots), Koofiyad iyo Boorso dhabarka, waxaana si toos ah looga iibsanayaa 
(Paris) 17 Jan 2017 Weerar yahanka kooxda PSG ee Edinson Cavani ayaa si cad u sheegay inuu ku dhawaa dib ugu laabashada horyaalka talyaaniga.
Edinson Cavani ayaa sheegay inuu go’aansaday ka tagista PSG kadib markii uu kooxda ka waayay inuu ka ciyaaro booska weerarka oo xiligaas uu ka ciyaarayay Zlatan Ibrahimovic.
29 jirkaan ayaa doonayay inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Napoli, laakiin go’aankii uu Zlatan uga tagay PSG ayaa markale ka dhigtay inuu badalo maankiisa.
“Fursad ayaan u haystay inaan dib ugu laabto 
PSG oo ku soo biirtay tartanka saxiixa Kostas Manolas
(Paris) 17 Jan 2017 Kooxda PSG ee dalka France ayaa ku soo biirtay tartanka saxiixa daafaca kooxda Roma ee Kostas Manolas kaas oo diirada u saaran kooxo badan.
Kostas Manolas ayaa diirada u saaran kooxaha Inter Milan, Arsenal iyo Chelsea, balse Roma ayaa isku dayeeysa inay ka saxiixdo heshiis cusub.
Qandaraaska 25 jirkaan ee kooxda Roma ayaa dhacaya 2019, laakiin kooxda ka dhisan caasimada talyaaniga ayaa dhibaato kala kulmaysa inay ka saxiixdo heshiis cusub, waxaana loo badinayaa inay iska iibiso dhamaadka xiliciyaareed kan.
Drogba oo koox la’aan ah isla markaana sheegay inuu doonayo inuu ciyaaraha sii wado ayaa kol dhaweyd ka dhawaajiyay inuu jecel yahay naadigiisii hore ee Marseille isla markaana uu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto isagoo waliba mushaarkiisa dhimaya haddii ay u 
Zinedine Zidane oo loo magacaabay Tababaraha sanadka ee Faransiiska
(Paris), 10 Jan 2017 –Tababaraha kooxda Real Madrid ee Faransiiska Zinedine Zidane ayaa guul ku bilaabay waayihiisa Tababarenimo sidii uu horey ugu guuleystay waayihiisii Ciyaartooy, taas oo keentay in sanadkii dhammaaday ee 2016 uu guulo wax ku ool ah u horseeday Real Madrid isagoo la qaaday 3 Koob oo waaweyn.
Wargeyska ‘France Football Magazine’ ayaa Laacibkii hore ee Faransiiska Zinedine Zidane u magacaabay Macallinka Sanadka 2016 ee Waddanka Faransiiska ‘Meilleur entraîneur français de l’année 2016’, waxaana Zizou abaalmarintan uu kala 
Julian Draxler oo goolkiisii ugu horreeyey u dhaliyey kooxdiisa cusub ee PSG
(Paris) 08 Janaayo 2017 – Saxiixa cusub ee kooxda Faransiiska PSG Julian Draxler ayaa kooxdiisa cusub u dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku soo biiray.
Naadiga PSG ee ka dhisan caasimadda Faransiiska ayaa saxiixa Julian Draxler ku dhammaystirtay heshiis ku kacaya 30-ka milyan oo bound, waxaana ay ka soo qaateen kooxda Wolfsburg ee dalka Jarmalka.
Xiddiga reer Germany ayaa qallinka ugu duugay kooxdiisa cusub ee PSG heshiis ku eg ilaa 2021.
Julian Draxler ayaan goolkiisii ugu horreeyey u dhaliyey kooxdiisa 
Mario Balotelli oo garka loosuray ganaax laba kulan ah
(Nice) 06 Jan 2017 Weerar yahanka kooxda Nice ee dalka Faransiiska Mario Balotelli ayaa la dul dhigay ganaax laba kulan ah kadib markii uu casaan qaatay.
Mario Balotelli ayaa lootaagay casaan kulankii kooxdiisu ay 0-0 lagashay kooxda Bordeaux kulan ka tirsanaa horyaalka faransiiska 21-kii bishii hore.
Xiriirka kubadda cagta France ayaana ku ganaaxay Mario Balotelli inuu maqnaado laba kulan, kuwaas oo muhiim u ah kooxdiisa.
Kulamada uu maqnaanayo weerar yahanka reer talyaani ayaa kala ah, Lorient iyo Metz, sidoo kale xiriirka ayaa ganaaxay laacibka qadka dhexe 
Edinson Cavani oo iska diiday lacagta badan ee shiinaha si uu u sii joogo PSG
(Paris) 05 Jan 2017 Weerar yahanka kooxda PSG ee Edinson Cavani ayaa iska diiday dalabyada qaaliga ah ee uga imaanaya horyaalka Shiinaha.
Laacib kaan ayaa xiliciyaareed fiican ku qaadanaya kooxdiisa PSG, kadib markii uu noqday weerar yahanka koowaad ee kooxda xiliciyaareed kan.
Edinson Cavani ayaa helay boos joogto ah tan iyo markii uu kooxda ka tagay weerar yahanka reer Sweden ee Zlatan Ibrahimovic.
France Football ayaa daaha ka qaaday in Edinson Cavani uusan diyaar u ahayn ka tagista kooxdiisa PSG, wuxuuna iska diiday dalabyo qaali ah 
Siduu u muuqanayaa safka PSG marka lagu daro xiddigeeda cusub ee Julian Draxler….(Midee ku leh 3-dan SHAX???)
(Paris) 03 Jan 2017. Warsidaha Goal ayaa qallinka u qaatay oo 3-shax oo kala duwan ka sameeyay marka safka PSG lagu daro xiddigeeda cusub ee Julian Draxler.
Xiddiga reer Germany ayaa ugu biiray kooxda reer France heshiis ku kacay 30-milyan oo bound isagoo u saxiixay qandaraas ku eg ilaa 2021.
Haddaba sidee u muuqan kareysaa SHAXDA PSG marka safkeeda lagu daro xiddigan qadka dhexe ee weerarka:
RASMI: PSG oo dhammeystirtay saxiixa Julian Draxler…+SAWIRRO
(Paris) 03 Jan 2017. Waxaa la dhammeystiray heshiiska ku kacaya 30-ka milyan oo bound uu Julian Draxler ugu dhaqaaqayay naadiga PSG ee ka dhisan caasimada dalka Faransiiska.
Xiddiga reer Germany ayaa qallinka ugu duugay kooxdiisa cusub heshiis ku eg ilaa 2021.
Kooxda Wolfsburg ee ka ciyaarta Bundesliga ayaa bishii la soo dhaafay xaqiijisay in Draxler uu dhammeystirayo heshiiska uu ugu dhaqaaqayo PSG, iminkana naadiga reer France ayaa xaqiijisay inuu soo idlaaday heshiiska.
Jariiradda L’Equipe ayaa warineysa in Draxler uu jeebka ku shuban doono 